Windows 10: otu esi gbanyụọ nbanye nbanye - TELES RELAY
NZỌ & TELECOM
Windows 10: otu esi gbanyụọ ihuenyo nbanye
Otu esi achọta paswọọdụ WiFi gị
E3 2021: Ibu ahia, ikike Microsoft ohuru site na…
iCloud Mail maka web na-enweta ihe ndozi
Ọ bụrụ n’ịchọghị mkpa ọ dị iji nbanye nbanye na Windows 10, mara na ọ ga-ekwe omume ịkwụsị ya. Nke a bụ otu esi eme ya.
Inwe ihuenyo nbanye na kọmputa gị bụ ihe a na-ahụkarị taa, ma ị na-eji Mac ma ọ bụ PC. Windows. N'ikwu ya, nbanye nbanye nwere ike bụrụ ihe na-akụda mmụọ kwa ụbọchị ka ọ na-agbakwụnye mgbakwunye tupu i nwee ike iji kọmputa gị. O kwere omume ihichapụ a nzọụkwụ.
O doro anya, usoro nchekwa dịka nbanye nbanye bụ ihe dị mma, ọkachasị bara uru yana ọbụlagodi aro, ọbụlagodi iwu, ma ọ bụrụ na ịkekọrịta kọmputa, ma ọ bụ na ọha ma ọ bụ na ọ bụghị, ma ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ, n'ụlọ ma ọ bụ ebe ọzọ. Ọnọdụ ahụ dị iche ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị gị na-eji igwe. Ọ na-aghọ ihe na-adịghị mkpa n'ụzọ zuru oke.
Akaụntụ mpaghara na akaụntụ Microsoft
Tupu ịmalite, ị kwesịrị ịchọpụta ụdị akaụntụ kọmputa gị na-eji. Na Windows, enwere ụdị abụọ: akaụntụ mpaghara yana Microsoft.
Akaụntụ mpaghara bụkarị akaụntụ njikwa maka kọmputa gị. N'echiche, ị nwere ike iche na akaụntụ a dị ka akaụntụ echedoro karịa na paswọọdụ ya na-arụ ọrụ na igwe a ma ọ nweghị ebe ọzọ. A na-echekwa mmasị na ntọala gị na mpaghara na igwe ma ịkwesighi ịnweta internet iji banye na kọmputa gị.
Akaụntụ Microsoft, n'aka nke ọzọ, dị ka akaụntụ ụwa. Ọ bụrụ na ị na-eji ngwaahịa Microsoft ndị ọzọ dị ka Office 365, Hotmail, Outlook, wdg, ị ga-eji otu akaụntụ a abanye na kọmputa gị. Ihe bara uru bụ na nke a ga-emekọrịta nkọwapụta akaụntụ gị niile n'etiti ọrụ ndị a dị iche iche. Otú ọ dị, ihu ọma bụ na, na tiori, ọ bụrụ na ejiri akaụntụ Microsoft gị mebie, onye na-egwu ihe nwere ike nyocha ya na kọmputa gị.
Gbanyụọ ihuenyo nbanye maka akaụntụ mpaghara
Pịa igodo Windows + R.
Họrọ onye ọrụ na akaụntụ maka nke ị chọrọ deactivate nbanye na ihuenyo
Kọwaa igbe na-ekwu "Ndị ọrụ ga-abanye aha njirimara na paswọọdụ iji kọmputa a".
Tinye aha njirimara na paswọọdụ metụtara ma pịa OK. Ọ bụrụ na ịnwetụbeghị paswọọdụ, pịa OK.
Pịa na nyocha nhọrọ.
N'okpuru "Arịrịọ Nyocha", họrọ "Ọ dịghị mgbe"
Gbanyụọ ihuenyo nbanye maka akaụntụ Microsoft
Iji gbochie kọmputa gị ịrịọ maka akaụntụ Microsoft gị, ị ga-ebu ụzọ gbanwee akaụntụ Microsoft gị na akaụntụ mpaghara.
Pịa Malite -> Ntọala -> Akaụntụ.
Họrọ Ozi ịntanetị na akaụntụ gị na aka ekpe.
Pịa na “Nyochaa ya na akaụntụ mpaghara” iji malite ọkachamara.
Tinye nzere akaụntụ Microsoft gị maka nkwenye.
Pịa na abia.
Họrọ aha njirimara na paswọọdụ wee pịa Ọzọ.
Lelee na ozi ahụ ziri ezi ma ọ bụrụ na afọ juru gị, pịa "pụọ ma mechaa".
Soro ntuziaka na ngalaba gara aga "Gbanyụọ ihuenyo nbanye maka akaụntụ mpaghara".
Apple FaceTime na-emesịa na-abịa Windows na gam akporo
Esi ewepu Flash Player na Windows 10 na macOS
Nyochaa okpomọkụ nke nhazi gị na Core Temp
Edemede a pụtara izizi na https://www.begeek.fr/windows-10-comment-desactiver-lecran-de-login-357610
TELES RELAY 52653 posts 1 comments
Nyocha | My ndị enyi Republican, kwụsị ịtụ egwu Donald Trump - New York Times
India: Ọnwụ abụọ ahụ na-ebelata, mana India ka bụ obodo kacha metụta | Akụkọ India
E3 2021: Ibu ahia, ikike Microsoft ohuru nke Avalanche Studios nyere
Site n'ụzọ, gịnị kpatara eji akpọ iPhone iPhone?